I-Microsoft Office 365 kunye ne-SharePoint: Inhlanganisela epheleleyo | IYO
I-Microsoft Office 365 kunye ne-SharePoint: Inhlanganisela epheleleyo
I-Microsoft Office 365 kunye ne-SharePoint
SharePoint kunye neHhovisi
Thetha i-Microsoft Knot
Microsoft Office unomdla wokuba sisisitye sommandla ngamnye osebenzayo, kwaye i-Office 365 incedisa nje ukulungiswa kwaloo ndlela. Ukhuseleko lwamafu olusebenzayo lwe-Skyhigh Networks lufumene ukuba ulawulo lwalusetyenziswe ngokubanzi ngokusetyenziswa kweefayili eyenziwa ngokusetyenzwa ngabadlali. Enye yeenzuzo ezintle zeefowuni eziyaziwayo kukuba njengombandela udibanisa nezinye iifayili zoshishino ezincedo, ukuphucula kokubili ukusebenza nokusebenza kakuhle.
As Ofisi ye365 iya kuba yimiqathango emgangathweni, ngokunjalo i-SharePoint, isixhobo somzenzelo seMicrosoft. I-SharePoint esebenzayo, amaqela angasebenzisana nokusebenza okufanayo, kunye nokuhlaziywa kufumaneka ngokuthe gqolo. Esikhundleni sokufumana ukukhathazeka kwamaxwebhu omyalezo phambili nangemuva, iingcali zingasayina kwindawo enye kwaye zibone ukutshintshwa kwentshukumo yonyaka ngamnye.
Ukuze uzuze ngokwenene, kuba nokuba kunjalo, amalungiselelo amabini afanele asebenzisane nomnye nomnye, afana neenkambiso zomtshato ongaqhelekanga. Nazi izinto ezimbalwa ze-IT eziqingqiweyo kufuneka zicinge malunga nokusebenzisa Microsoft Office 365 kunye ne-SharePoint kwisizinda esifanayo kunye nokusebenza kwazo ngokubalulekileyo.
Ukwenza lo msebenzi ongabonakaliyo, ukuxhuma i-SharePoint kwi-Office 365 kwenziwa nge-Connect kwi-Office kwi-SharePoint Server. Kulapho, unokufaka, ubeke iliso, uphume kwiinkampani kunye nesofthiwe. Kwimeko nayiphi na into, iinkcukacha zokudibanisa ezi zigaba zibini ziva nje ubusuku obukhethekileyo - kunye necandelo elincinane lenkqubo. Iqela lakho liza kufuneka lilungiselele ngaphambi kwexesha ukuba uza kusebenza njani neqabane elitsha.
Nangona ukucinga ukuba zeziphi izigqibo ezinokugqitywa ngeSabelo, abalawuli kufuneka bakhethe ukuba ngubani omele anikwe umbono kunye nokuguqula amalungelo kwi-SharePoint ngayinye, kunye nawaphi amalungelo okubekwa kwelinye icala. Njengoko abasebenzi bebuyela emuva nangaphandle, ukwakha indlela kunye nenkqubo yokuguqulwa kwamagunya ngokuhambelanayo nokwenziwa ngendlela efanelekileyo ngokukhawuleza.
Ubhaliso obungabonakaliyo lwenza umsebenzi womtshato ohloniphekileyo, kwaye i-SharePoint ibonisa indlela yokuvuleka kakhulu ngendlela ethetha ngayo ne-Office 365 kunye nabaxhasi bayo. Njengoko iMicrosoft ibonisa kwiphepha lewebhu, i-SharePoint ibonakala kumxhasi wokuphela ngeprogram yewebhu, apho bangabheka khona i-assortment yamacandelo. Abaxhasi bangabheka amaxwebhu, bafake iifayile kwi-OneDrive, sebenze ngokubambisana nabanye, okanye banike iifayile ezikhoyo kumaqela abo. Xa zizonke, amaxwebhu anokunikwa umbutho wonke kwi-SharePoint yangaphakathi. Isixhobo esibalulekileyo senza ukuba kube lula kwiqela lonke ukuqaphela okwenzekayo kwaye lenze lukhuni ngokuvula nayiphi na inkqubo yewebhu.
Ngaphambi kokuphakama kweempahla zemizamo ehlanganyeneyo njengeSahluko seSahluko, ukulawula ukuguqulela kwakuphupha elibi - kungakhathaliseki ukuba ngabaxhasi bokugqibela. Emva koko, xa igosa lenze uxwebhu kwiMicrosoft Word okanye kwi-Excel kwaye luthumele nge-imeyile, umzuzi unokugcina kuphela ukulungelelaniswa kwakhona kwakhona. Ngaphandle kokuba umxhamli asebenzise iinguqulelo zeNdlela ngaphambi kokuguqula umqulu, iqela liya kufuneka libuyiselwe kwakhona ukuba ngaba utshintsho lufanele lutshintshwe.
Nangona kunjalo, namhlanje, ubukhulu obuphambili be-Microsoft SharePoint abugcini nje ngokuhambisa iimpazamo ezivela kwiifomu ezahlukeneyo kodwa ukususela ekubeni wonke umntu usebenza kwindawo efanayo, ngokufanayo kufaka imbali yokuguqulela eyenza abathengi ukuba bahlolisise iinguqu ezidlulileyo zexwebhu.
Nangona kukho iifayili ezahlukeneyo ezifikelelekayo, iMicrosoft PowerPoint iyona yinto eyaziwayo kakhulu kwiingeniso. Kwimeko nayiphi na into, ngoku kuhlanganiswa okutsha, awuyi kuphinda ube kwindawo efanayo ukubonisa amaqabane ebhizinisi. I-SharePoint esebenzayo, unokunikezela izethulo zakho ze-PowerPoint kubathengi kunye nabambiseneli kwihlabathi kunye neenkcazo ezimbalwa kuphela. Kungakhathaliseki ukuba uyayisebenzisa ngokubambisana nengxoxo yevidiyo okanye ngokuzimela, oku kufanelana kuya kunceda ukuba ukhulule ixesha kunye neempahla.
Kwiimanyano ezinxulumene kakhulu, iincelisi zisebenza ukuqinisa omnye nomnye. Amaphuzu avela kwi-SharePoint afaka i-ins eyenzayo Microsoft Office izinto kunye namaxwebhu angaphezulu kweenkonzo. Ukuma phakathi kweyona nto ibalulekileyo yi-DocuSign, engabongeza amandla okumakisha kwizivumelwano, iingcebiso kunye namaxwebhu ahlukeneyo. Ekubeni inxalenye enkulu yale nto iqwalaselwa ngaphakathi SharePoint, iingcali zenza iinkqubo ezinzima kunzima kakhulu, zigcina yonke indawo kwindawo enye ifuna ukulandela okulandelayo.Izifundo zeComputer Training & Certification
Microsoft Office 365 uthathe isofthiwe esaziwa kakhulu kwiofisi efini, okwenza kube nzima ukunyamekela umsebenzi. Ngexesha apho Ofisi ye365 idibene ne-SharePoint, abalawuli banokwenza isiseko apho oogxa banokukwazi khona ngaphandle kweqela elongeziweyo kunye nokunikezela kumaqabane angaphandle. Imveliso yokugqibela iya kuba ukwandiswa kobuchule, oko kuthetha ukuba wonke umntu uya kufeza ngaphantsi ngaphantsi, ekuncediseni ishishini ngokukhawuleza.
Njengoko umlawuli enethemba lokuzuza kwizinto eziziwayo zeMicrosoft, kukho iindlela ezithile ozithathayo ukuze uqiniseke ukuba unamandla okhethekileyo kunye nokufunda ukwenza umtshato usebenze. Kwabanye abanethemba lokudala ubuchule ekusebenziseni i-Microsoft Office 365 kunye ne-SharePoint, inyathelo lokuqala lihlala lifumana I-Microsoft MCSA: Isiqinisekiso se-Office 365.
Emva kokuba usebenze Ofisi ye365, yenza ukusebenzisana kwakho ne-Microsoft kule nqanaba elandelayo kunye MCSE: Ukuvelisa ukunqoba i SharePoint.
I-SharePoint Online Vs SharePoint On-Premises
Inkqubo yokuQinisekisa iMveliso ye-MCSE